IZArc compressor-decompressor. Ungayifaka kanjani i-IZArc ikhompiyutha yamahhala yamafomethi amaningi bese ukhohlwa nge-WinRar | Izindaba zamagajethi
IZArc compressor-decompressor. Ungayifaka kanjani i-IZArc ikhompiyutha yamahhala yamafomethi amaningi bese ukhohlwa nge-WinRar
Hezinsukwini ezimbalwa ezedlule bengikhuluma ngakho ama-compressors futhi kuleyo ndatshana wachaza ukuthi yini icompressor nokuthi yenzelwe ini. Uma usufundile lesi sihloko uzokhumbula ukuthi sikhulume ngama-compressors aziwa kakhulu kepha akhokhelwa njenge WinZip o I-Winrar ngabuye ngabalula nababili abakhululekile abanjengo I-7-Zip noma i IZArc. Hhayi-ke namhlanje sizobona ukuthi leyokugcina ifakwa kanjani, i- IZArc, eyi-compressor-decompressor yamahhala ngesiSpanish.
II-ZArc iyahambisana neWindows 98 / NT / 2000 / XP / 2003 kanye neWindows Vista. Phambilini le compressor ibingasebenzisani neWindows Vista kepha kusukela kufayela le- Uhlobo lwe-IZArc 3.8.1510 isebenza kahle kunguqulo engu-32-bit yeVista. Ngakho-ke uma unanoma iyiphi yalezi zinhlelo zokusebenza ezifakiwe kukhompyutha yakho, awudingi ukuhlangabezana nezinye izidingo ukuze ukwazi ukusebenzisa i-IZArc.
SUma ungakasithathi isinqumo sokufaka i-IZArc, ngizokukhumbuza ukuthi kumahhala, ukuthi awudingi ukuhlangabezana nanoma yiziphi ezinye izidingo zokufakwa nokuthi ngaphandle kweSpanishi kunezilimi ezingaphezu kwezingu-40 ezitholakalayo. I-Izarq iyi-compressor ezokusiza ukuthi wenze yonke imisebenzi edingekayo ye-compression-decompression ngamafayela akho ngaphandle kokukhokha iphenathi. Ungakwazi:
zip bese unzip
dala amafayela ukuzicindezela (ngokuchofoza kabili nje) ukuthumela kubangani bakho ngeposi ukuze bakwazi ukuwavula ngaphandle kokuthi kufakwe i-compressor kumakhompyutha abo
hlukanisa ifayela libe izingxenye eziningi
join amafayela ahlukaniswe ngama-chunks amaningi
unga ngemfihlo ngephasiwedi amafayela akho acindezelwe ukuwavikela ekuhloleni amehlo
lungisa amafayili acindezelwe onakele
futhi uguqule amafayela phakathi kwamafomethi wokuncipha ahlukahlukene
BNgicabanga ukuthi usuvele uqinisekile ngesigamu ngobuhle be-IZArc. Khohlwa mayelana I-WinRAR ne-WinZIP futhi wamukele eyakho obambele IZArcKungani ukhokhela uhlelo olulodwa ngenkathi omunye enza okufanayo mahhala? Ake siqale ngokufakwa kwe-IZArc:
1) Into yokuqala okufanele uyenze ukulanda uhlelo. Unezinketho ezimbili, kusuka ku-Softonic ngokuchofoza lapha, noma kusuka kuwebhusayithi esemthethweni ye-IZArc. Kunoma ikuphi, sizolanda inguqulo yakamuva yohlelo, okwamanje eyi- 3.81.1550. Khumbula ukuthi i-IZArc imahhala, ngakho-ke ungakwazi khulula umculo kunoma iliphi kulawa makhasi amabili bese ulisebenzisa mahhala. Ukufakwa kuzokwenziwa ngesiNgisi kepha kulula kakhulu futhi ekugcineni kokufakwa singabeka uhlelo ngolimi esilufunayo.
2) Lapho uhlelo silandiwe sizocofa kabili kufayela bese kuqala ukufakwa kwe-IZArc. Ewindini lokuqala elivelayo, bayasamukela ngesiNgisi ("Wellcome to the IZArc 3.81. ...") sizocofa ku- "Next>" bese kuvela iwindi lokwamukela ilayisense lomsebenzisi:
Usuyazi vele ukuthi ukuze usebenzise uhlelo kufanele uvumelane nemibandela ebekwe ngabadali bayo, ngakho-ke funda ilayisense (ngesiNgisi) futhi uma uvuma, hlola inketho ethi "Ngiyasamukela isivumelwano" bese uchofoza ku- «Okulandelayo> ».
3) Elinye iwindi lizovuleka lapho kuzofanele uchofoze khona futhi ku- «Okulandelayo>» nakuwindi elizovuleka ngokulandelayo, chofoza ku- «Okulandelayo>». Uzofika ewindini elinesihloko esithi "Khetha Imisebenzi Eyengeziwe":
Lapha unezinketho ezimbili. Ungakha isithonjana kubha yokuqalisa esheshayo («Dala isithonjana Sokuqalisa Ngokushesha») noma dala isithonjana se-IZArc kudeskithophu ("Dala isithonjana sedeskithophu"). Khetha izinketho ozithandayo ngokuthikha ibhokisi elihambisanayo. Bese uchofoza kunkinobho ethi «Okulandelayo>».
4) Ewindini elivulayo, chofoza ku- "Faka" bese ukufakwa kuzoqala. Uma iqeda, kuzovulwa iwindi lokukhetha ulimi Khetha ulimi olufunela i-IZArk ngokuskrola nebha evele ohlangothini lokunene lwewindi. Lapho ukhethe ulimi, chofoza ku- "KULUNGILE".
5) Ngemuva kokuchofoza ku- "KULUNGILE", iwindi le- "Izinketho" lizovuleka ngokuzenzakalela ngolimi olukhethiwe, lapho ungenza khona izinguquko ezahlukahlukene kuzilungiselelo zohlelo. Okwamanje sizochofoza ku- "Yamukela" bese siqhubeka nokufaka. Kwincwajana ethuthuke kakhulu engizoyilungisa kungekudala, sizobona ukuthi lezi zinketho zenzani nokuthi ungalungiselela kanjani uhlelo.
6) Iwindi lokugcina lokufaka lizovulwa, lisazise ukuthi ukufakwa kwe-IZArc sekuqediwe. Susa ukumaka ebhokisini elithi "Buka okusha" uma ungafuni ukufunda ifayili lombhalo ngokuthuthuka okwethulwe ohlelweni (ngesiNgisi) bese uchofoza ku- "Qedela" ukuqeda.
BKulungile ngalokhu usuvele uqedile ukufakwa kwale compressor enkulu esebenza njengeyona ndlela ephelele yamahhala kukhompiyutha yeWinRAR ekhokhelwayo. Kungenzeka ukuthi uma uchofoza inkinobho ethi "Qeda" ewindini lokugcina, isiphequluli sakho se-Intanethi sizovuleka futhi sixhumane isigaba kusuka ekhasini elisemthethweni le-IZArc lapho bachaza khona, ngesiNgisi, ukuthi unganikela kanjani ngokuzithandela kubadali be-IZArc. Nikela uma ufuna noma vele uvale iwindi.
ENgiyethemba uzuza kakhulu kulolu hlelo ngosizo lwale mini-manual, ngizoqedela okokufundisa kwe ukumiswa nokusetshenziswa kwe-IZArc ukuze ukwazi ukusizakala ngazo zonke izici zalesi compressor samahhala esihle. Kuze kube yileso sikhathi imikhonzo ye-vinegary.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » IZArc compressor-decompressor. Ungayifaka kanjani i-IZArc ikhompiyutha yamahhala yamafomethi amaningi bese ukhohlwa nge-WinRar
I-athikili enhle kakhulu futhi ngaphezu kwakho konke okwenziwe kakhulu, ingisizile ukuthi nginqume ukufaka i-IZArc, sengivele ngiyizamile futhi isebenza ngokumangalisayo.
Umbulali Uviniga kusho
Sawubona Marvin, ngiyabonga ngamazwi akho nokuvakasha kwakho. Ikhasi ngakwesobunxele elezizathu zokuhlela, lonke ikhasi lenzelwe ngaphandle kwamatafula (ngaphandle kwezindawo ezimbalwa) futhi ngaqala ukubambelela kwesobunxele ukuze kube lula lapho ngifaka
. Ngokushesha nje lapho nginesikhashana ngiyasithumela esikhungweni, ngoba nami ngiyayithanda kuleyo ndawo.
Ukubingelela okumuncu ngokukhethekile.
Phendula ku-Killer Vinegar
Ngiyabonga, umbulali wami engimthandayo. Nakhona incazelo ewusizo. Ngivumelana nawe: IZARC inketho enhle kakhulu, edinwe ukuthi kufanele uvuselele i-zip noma i-rar njalo.
Futhi ngakho konke lokhu, futhi njengoba kungokokuqala ngqa ukubhala, ngiyanihalalisela ngalesi sinyathelo semfundo. Ngifisa sengathi ngabe bengiyazi le webhusayithi cishe unyaka owedlule, lapho ngiqala ukucubungula kakhulu ikhompyutha futhi ikakhulukazi ukuvula i-Net. Bekungaba wusizo olukhulu ukuba nomuntu ongazi kuphela, kodwa oziveza ngokucacile futhi ophendula ngokujabula imfundo. I-Chapeau.
Ngendlela, i-maniac engiyiyo, kungani ukhethe ukwethula ikhasi eliboshelwe ohlangothini lwesobunxele futhi aligxilile ngqo?
Umbuzo owodwa nje, kufanele ngikhiphe i-Winrar ukuze ngilande i-Izarc? Ngiyabonga kakhulu
Ayikho i-papino, ongayifaka futhi uyisebenzise ngayinye noma nini lapho ufuna khona.
Ngiyabonga madoda, kepha ubungayenza iphelele ngokwengeziwe, angazi ukuthi ngingabhala kanjani, ngilungise, ngivivinye amafayela acindezelwe, amadoda abingelelayo ...
Konke kuzofika ngesikhathi esifanele uQueni 😉
rene hdz kusho
inkombandlela yokuthi unganqamula kanjani ifayili nge-extension .gz ingicela ivolumu id 0 bese ingicela ivolumu id -1 ojsal ingangisiza… .thanks
Phendula u-rene hdz
Mngani, inkinga onayo ukuthi ushoda ngezingxenye zefayela. Kuze kube unayo yonke, ngeke ukwazi ukwehlisa amandla.
sanibonani Sanibonani izifiso zami ezinhle. hheyi kufanele ngikhiphe icompressor yami yakudala noma yenza okufanayo?
Ungaba nawo womabili ama-compressors afakiwe ngasikhathi sinye futhi kungenzeki lutho. Kepha uma ufuna ukuba neyodwa kuphela, kuzofanele uzikhiphe enye leyo wena.
Yeka ikhasi elihle, bengingakaze ngilithole ngaphambili, ngicabanga
Ama-vibes amahle kakhulu kini okusethulela wona, futhi avela -
usizo olukhulu ngoba uluchaza ngendlela yokuthi -
kuyaqondakala, ngizobheka okokufundisa kwakho.
Sawubona, ngilufake lolu hlelo othi lapha izarc kodwa uma ngilanda ama-movie amaningi ngefomethi yeRAR ayivumeli ngiwavule ngalolu hlelo futhi angazi ukuthi kungani ngithola iphutha, ngizamile ngamafilimu ahlukene ama-4 futhi angikwazi ukuwacindezela. Abanye abantu UMA isebenza kahle kubo futhi bayayivula ku-zip kodwa nge-winrar. Ngicela ungisize, unginikeze isibonelo ngesinyathelo ngesinyathelo sokuthi ungayivula kanjani i-zip noma enye inkokhelo yamahhala lapho kungcono ngichaze. Ngicela ungiphendule ngokushesha okukhulu.Ngibonga kakhulu
Uyezwa ukuthi ngingalicindezela kanjani ifayili kulolu hlelo! ????
Ngiyabonga, ungisizile, ngiyethemba futhi ungangisiza futhi
ngoba abachazi inqubo efanayo isib
abdiel Gg kusho
Sawubona, ngiyajabula ukuthi ufake leli khasi, ngililandile futhi ngiyethemba ukuthi le decompressor kulula ukuyisebenzisa kune-win rar noma i-win zip ngoba angiziqondi lezo
Phendula u-abdiel Gg
Bayiziphukuphuku ukuyiphakamisa, bengingalethi okuthile ngayo futhi izithonjana aziveli
psss lokhu okuxakile inetha alizange liqonde indawo
kepha impi abayenzile kodwa ayikaze ikhishwe, abakhonzi ukwenza lokhu kuwe
HHoLA !! Ngibona kakhulu !! Isinyathelo ngasinye siphezulu futhi sisiza kakhulu !!! ngiyabonga kakhulu caapo !!!
cruz hernandez r kusho
Uviniga, wuhlelo oluhle kepha uma ngine-winrar efakiwe, ngivunyelwe ukuyifaka noma ngizoba nenkinga kwi-hard drive yami, Ngiyabonga
Phendula ku-cruz hernandez r
diskulpen Nginenkinga! Angikwazi ukuvula uziphu i-movie eyehlela ezingxenyeni eziyi-8! ingitshela ivolumu id 0! Ngingalujabulela usizo lwe-km !!
Noma ikuphi FM. Ungayakha kanjani i-akhawunti kunoma ikuphi.FM ukulalela umculo wakho noma kuphi
Nsuku zonke kuzalwa umuntu omunyayo. Ungabi ngomunye wabo